Guddiga Doorashada oo hakiyey Doorashada Hirshabelle Kadib shaqaadadii xalay ka dhacday Jowhar – Warsaxafadeed • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Guddiga Doorashada oo hakiyey Doorashada Hirshabelle Kadib shaqaadadii xalay ka dhacday Jowhar – Warsaxafadeed
Guddiga Doorashada oo hakiyey Doorashada Hirshabelle Kadib shaqaadadii xalay ka dhacday Jowhar – Warsaxafadeed
November 19, 2016 - By: Mohamed Jeenyo
Guddiga Doorashada Federaalka Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ay kasoo saareen iska horimaadkii Xalay ka dhacay magaalada Jowhar uga hadlay ahmiyada sugida amniga ee goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan.
Iska horimaadkii Xalay ka dhacay xarunta Doorashada ee Jowhar ayaa waxaa lagu eedeeyey illaalada Wasiirka Dhalinyarrada iyo Cayaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xassan Nuux oo kamid ahaa sadex murashax oo isku heystay kursiga Beesha Jidle/ Gugundhabe. Waxaana la sheegay in ciidamada amniga sugayey ay laftooda rasaas culus ay rideen.
Wareega hore ee doorashada ayaa Wasiirku wuxuu helay 21 cod, halka Musharaxa kale ee la tartamayay uu helay 23 cod, Musharaxa saddexaad oo 7 cod helay ayaa wareega koowaad ku haray. Hase yeeshee markii loo gudbay wareegii labaad ayaa waxaa goobta ka dhacay buuq iyo gacan ka hadal u dhexeeyay ergooyinka iyo tartamayaasha
Ilaa iyo hadda ma jirto cid ku dhimatay ama ku dhawacmay is-rasaasaynta ka dhacday Jowhar, hase yeeshee waxay sababtay in ergooyinkii ay ka cararaan goobta.
War-saxaafadeedka kasoo baxay Guddiga Doorashada ayaa lagu sheegay in hakad la geliyey codbixintii ka socotay magaalada Jowhar, illaa inta laga sugayo amaanka goobta ay ka dhacayso codbixinta. Doorashada ayaa la sheegay in dib loo bilaabayo marka ay Guddiga Amniga ay fasaxaan in dib loo bilaabo codbixinta.
Maaha markii ugu horeysay uu dagaal ay sababeen Murashaxiinta ay ka dhacaan goobaha ay codbixinta ka dhaceyso, waxaana is rasaaseyn noocaan ah ay horey uga soo dhacday magaalooyinka Baydhabo iyo Cadaado oo ay iska horimaadyo ku dhexmareen qaar kamid ah murashaxiinta u tartamaya labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka.
Waxaa hada la hadal hayaa in xarunta codbixinta ka dhaceyso ee Jowhar lagu wareejiyo Ciidamada AMISOM si ay u sugaan Amniga.
Hoos ka akhriso Warsaxaafadeedka Guddiga Doorashada ee heer Federaal oo hakiyey codbixintii ka socotay Jowhar.
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashada Dadban (GFHDD) waxuu aad uga walaacsan yahay rabsahadaha gacan ka hadalka ah ee ka dhacay xarunta doorashada ee Hirshabeelle /Jowhar xalay oo ay taariikhdu ahayd 18/11/2016, markaas oo ay socotay codeeynta doorashada kursiga Beesha Jidle/ Gugundhabe.
Guddigu si adag ayuu u cambaareynayaa rabshadahii hubeysanaa, isagoo u rajeynaya muwaadiniinta waxyeeladu kasoo gaartay bogsiimo deg deg ah.
Haddaba, Guddiga oo muhiimad gaar ah siinaya amniga deegaan Doorashada Hirshabeelle/Jowhar, gaar ahaan amniga Guddiyada Doorashooyinka, Ergada iyo Musharaxiinta, waxuu shaacinayaa in si ku meel gaar ah loo hakiyay qabashada doorashooyinka kuraasta dhiman ee Golaha shacabka ee Jowhar ka dhici laheyd.
Guddiga Federaalkan Hirgelinta Doorashada Dadban waxuu ka codsanayaa madaxda Dowlad Goboleedka Hirshabelle iyo Guddiga Amniga Doorashooyinka Dadban in ay qiimeyn iyo dib u eegid ku sameeyaan qorshaha suggidda amniga ee deegaan doorashada guud ahaan iyo gaar ahaan xarunta doorashooyinka Hirshabeelle. Waxaa doorashooyinka dib loo billaabayaa marka ay Guudiga Amniga Doorashooyinka ay soo jeediyaan in dib loo bilaabo codbixinta, iyagoo xoojinaya amniga deegaan doorashada Hirshabeelle.
Maamulka Degmada Qardho iyo kan Gobolka Karkaar ayaa gubay hoggo laga samaynayay dhuxul.